Broadcasting Broadcasting Broadcasting Q&A oo ay weheliso injineer maqal ah Chad Robertson | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Broadcasting Broadcasting Broadcasting Q&A oo ay weheliso injineer maqal ah Chad Robertson
Broadcasting Broadcasting Broadcasting Q&A oo ay weheliso injineer maqal ah Chad Robertson
S: Waa maxay doorkaaga imminka jira maxaase ku jira?
A: Waxaan ahay injineer maqal oo madax-bannaan iyo isku-darka, inta badan waxaan u shaqeeyaa sida A1 ciyaaraha isboortiga ee ESPN, in kasta oo aan u shaqeeyey shabakado badan iyo sidoo kale macaamiisha kale ee shaqadayda. Waxa ugu badan ee aan sameeyo waa kubada cagta, kubbadda koleyga, baseball iyo waxsoosaarka istuudiyaha. Waxaan sidoo kale sameeyay munaasabad heer sare ah oo aan ahayn isboorti, oo ay kujiraan warbaahinno siyaasadeed oo muhiim ah. Tusaale ahaan, hal tilmaame wuxuu ahaa doorkeyga madax ahaan maqalka baahinta ee 2013 George W. Bush Madaxweynaha Xarunta Xaraynta; iyada oo Madaxweynaha Maraykanka nool oo dhan uu ka qayb galayo, waxay ahayd dhacdo la xasuusto. Waxaan sidoo kale qabtaa xoogaa shaqo sida soosaarka dhawaaqa goobta.
S: Sidee ayaad u gashay codka warbaahintu?
Jawaab: Waxyaabahaas oo dhan waxay ka bilaabeen kaniisaddayda, markii aan ahaa 14 sano. Waxaan xiiseynayay kooxda AV iyo madaxa kaniisada AV (oo sidoo kale ahaa gaari xamuul ah A2 waqtigaas) wuxuu igu darey shaqaalaha tabaruca. Markii ay noqotay, waxaan guntiga u guntaday soo saarista war baahinta. Marka, waxaan ka qayb qaatay wax walba laga soo bilaabo kaamirooyinka ilaa dhawaaqa. Waxaan u hibeeyay dhawaaqa anigoo u arka inay tahay tan ugu xiisaha badan.
Intaa ka dib, waxaan xaqiijiyey xoogaa shaqo shirkadeed oo ka baxsan kaniisadda. Kulliyadda, waxaan u shaqeeyay sidii A2 dhacdooyin kala duwan. Ka dib kuliyadda, waxaan bilaabay inaan shaqaaleeyo intaa ka dib waxaanan ugu dambeyntii u dhaqaaqay doorarka A1. Kooxda A1 ayaa runtii ka takhalustay markii ESPNU ay ku timid khadka tooska ah ee 2005. Gaari xamuul A1 ah wuxuu xisaabiyaa qiyaastii 85-boqolkiiba dakhligeyga hadda. ESPN waxay macmiil weyn u aheyd sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo bixineysa fursado badan oo wax lagu barto laguna kobco.
S: Maxay ahayd mid ka mid ah khibradahaaga ugu caansan ee Calrec?
A: Markii ugu horraysay ee aan ka shaqeeyo Calrec Apollo waxay ahayd intii lagu jiray Shirweynihii 2012 NATO. Farshaxanka caadiga ah ee Calrec, console wuxuu si dhakhso leh u muujiyey dabacsanaantiisa iyo waxtarkiisa, oo wuxuu muujiyey inay leedahay ilo muhiim ah iyo awood u adeegsiga. Waxaan soo marnay dariiqooyin badan oo soo gala una soo baxa ugu yaraan afar luqadood, isku mar. Dabacsanaanta masraxa, sida kala-goynta qalabka korantada, xirmooyinka xirmooyinka iyo u-qoondeynta VCA-yada, oo ay weheliso astaamo kale, ayaa ka dhigaya mashruuca mid aad u fudud in la maareeyo.
S: Sidee ayaa habka guud ee wararka isboortiga isbedelay waqtigaaga aad kujirtid qalabka korontada?
A: Tirada barnaamijyada ciyaaraha isboortiga si weyn ayey u kortay. Aaladaha gaarsiinta ayaa ku batay, sidoo kale, taleefannada mobilada iyo aaladaha kale ee dhijitaalka ah oo lagu daray adeegyadii telefishanka ee caadiga ahaa. Laakiin, markii ay dhalmada gaarsiinayso tirada dadka wax soosaarka goobta ku sii socda ayaa sii yaraanaya. Wali had iyo jeer waxaa jira qof maqal ah, laakiin marwalba ma aad yeelan doontid soosaarista ama kooxaha sawirada.
Dhinaca soosaarka, si joogto ah ayaa naloo codsanayaa inaan wax badan ku qabanno waqti yar. Waxaan sameyneynaa waxbadan oo dheeraad ah marka loo eego wareejinta wadooyin badan oo maqal ah, waxaana u dheer inaan la waafajino habka isgaarsiinta loo isticmaalo inta u dhexeysa meesha fog iyo qolalka xakameynta wax soo saarka. Dhacdo kasta iyo goob kastaa way ku kala duwan yihiin, marka wax soo saaris kasta waa in la dejiyaa oo dumiya. Nasiib wanaagse, waxaan caadi ahaan ahay Calrec, sidaa darteed kama walaacsanahay inaan waqti u helo qolka console. Kulliyadaha loo yaqaan 'Calrec consoles' waligood qayb kama ahan taraafigeyga-qatarkayga ─ taasi maahan meesha waqtigeygu iga dhammaado. Waxaa jira qaybo badan oo wax soo saarka ah oo ay tahay in la dejiyo marka lagu daro qalabka loo yaqaan 'console', oo ay ku jiraan gudbinta iyo is dhexgalka. Waqtiga intiisa badan, Calrec runtii waa xalka dhibaatada. Waan ogahay inay sameyneyso waxa loola jeedo; way shaqeynaysaa.
S: Oo tirinta kanaalka ayaa waliba sii weynaatay, miyaanay ahayn?
A: Xaqiiqdii; Maaha wax aan caadi aheyn in la maareeyo boqolaal wado hal mar hada. Tusaale ahaan, bishii Luulyo, waxaan ku jiray Calrec Artemis waxaanan ku aragnay seddex bandhig oo ku yaal seddex shabakadood oo kala duwan ─ ESPN, ESPN2 iyo SECN. Dhammaan seddexda bandhig ayaa isla marayay hal guddi, isla mar.
Isku darka ilaha ayaa si joogto ah isu beddelaya, sidoo kale. Waxaan heli doonnaa qaabab fara badan oo calaamadaha soo socda ah: analog, AES, MADI, Dante, iwm. ─ kuwa dhammaantood waa kala duwan yihiin ballac ahaan. Qaarkoodu waa mono ama stereo, halka kuwa kalena ay yihiin dhawaaqyo ama qaab cusub, sida Dolby Atmos. Waan ogahay in Calrec wax ka qaban karo dhammaan kuwaas.
Khadkii hore ee dhijitaalka ahaa ee Calrec, taxanaha Alfa, wuxuu ahaa mid weyn, iyo qormooyinkaas (Alfa, Sigma, Omega, iwm) ayaa wali si adag ugu shaqeynaya munaasabado badan. Markii Apollo iyo Artemis ay soo baxeen, waxaan xasuustaa anigoo la yaaban sida xoogga badan iyo dabacsanaanta ─ gaar ahaan tirada kanaalka iyo wadiiqooyinka ay qaadi karaan. Waxaan ka shakisanaa inaan waligeen ubaahan nahay awooda noocaas ah, laakiin halkaan annagaa joognaa. Daacadnimo, hadda, markii aanan ku jirin mashiinka awoodda iyo dabacsanaanta noocaas ah, waxaan dareemayaa inay gacmahaygu isku xidhan yihiin.
S: Sideed ugu wajahan tahay baahinta ciyaaraha 'caadiga ah' ee isboorti?
J: Caadi ahaan waxaan saarannahay gaari kale maalin walba, sidaa darteed ma jiro wax aan caadi ahayn oo ku saabsan aaladda kumbuyuutarrada aniga ahaan. Gawaarida qaar waxay leeyihiin wax caadi ah, laakiin waxaan door bidaa inaan ka bilowdo miis madhan. Marka, markay tahay marki iigu horaysay oo aan fariisto qalabka lagu ciyaaro ee aanan hore u joogin, ciribtirida dushiisa ayaa ah talaabada iigu horeysa.
Nasiib wanaagse, consoles Calrec waa kuwo aad u fudud oo wax ku ool ah in la dejiyo; waa mid toos ah oo dhakhso badan in dib loo dhiso sida aan jeclahay. Markii mashruucu sii kordhayo, way fududahay in lagu daro ama dib loo dejiyo ilaha dib loo habeeyo dusha sida loogu baahan yahay ─ taasoo ah faa iido weyn maadaama mashruuc kastaa uu ka duwan yahay kana duwan yahay.
S: Imisa qalab otomaatig ah in la isticmaalo?
A: Waxaan u isticmaalaa makiinadaha isku-xirka isku-darka loogu talagalay ogeysiisyada, taas oo runtii ah nooc waxtar u leh soosaarida otomatiga wax soo saarka, laakiin bandhigyada isboorti ee tooska ah dhammaantood waa kuwo aan qorin. Qofna ma garanayo haddii ay dhici karto inuu jiro faragalin ama dhaawac ama taabasho, sidaa darteed uma adeegsano qalabka otomaatig ahaan dareenka dhaqameed. Waxaa suuragal ah inaan aado nasasho ganacsi gudaha sekennada 30 ama daqiiqadaha 10, taas oo kuxiran ciyaarta ciyaarta ─ sidaa darteed, marka lagu daro adeegsiga dhowr dhaadheer oo lagu furayo qalabka iswada, soosaarka ciyaaraha tooska ah laftiisa kuma amaahan karo in otomaatig loo dhigo.
S: Maxay ku saabsan tahay la kulanka Calrec ee ka dhigaya inay ka soo baxaan dadka badan?
Jawaab: Aad bay u kala duwan yihiin, xoog badan yihiin, una dabacsan yihiin ugana xoog badan yihiin, oo mitiridda… mitirku waa ifafaale. Taasi waa hal shay oo aan aad u xiiseeyo marka aan ka shaqeeyo waxkastoo kale: Waxaan had iyo jeer ku fikiraa, "halkee mitirkeyga? Waxaan ubaahanahay mitir badan!
Awoodda dabacsanaanta ee dib-u-habeynta mashiinka duusha, hadaan u baahdo, waa mid si gaar ah waxtar u leh ─ umana maleynaayo inaan waligey iskuul xirnaa ama ku iga dhacay hawada. Haddii aad rabto inaad dhaqaajiso feylasha hal dhinac oo ah qalabka loo yaqaan 'console' oo u gudbo dhinaca kale, waxaad u gudubtaa shaashadda, dhagsii, jiidaa waana la dhammeeyay. Qaar ka mid ah consoles-yada kale kuwaas oo ah mid aan macquul ahayn, ama waxay umuuqataa qaab-tallaabo 30 ah.
Waxaan u isticmaalayay Calrec inta badan shaqadayda sidii A1, oo waxaan xasuustaa inaan ku farxay markii ugu horeysay ee aan isticmaalo hal. Wax aan ka jeclahay Calrec ahaan shirkad ahaan waa in ay dhageysato kaliya ma aha iibiyaasha, laakiin sidoo kale adeegsadayaasha ugu dambeeya sidoo kale. Calrec had iyo jeer waxay sameysaa wax kasta oo ay awooddo si ay uga caawiso samaynta alaabada ay ugu adeegsan karto macaamiisheeda; taasi waxay u badan tahay inay gacan ka geysaneyso iyaga inuu noqdo hogaamiyaha suuqa.
S: Sideed u maleyneysaa in baahinta warfaafinta isboortiga ay horumarin doonto mustaqbalka dhow?
A: In kastoo aan durba si xoog leh ugu weecaneyno eegista waxyaabaha ku jira aaladaha mobilada, waxaan runtii arkaa dadka daawanaya waxyaabaha ciyaaraha tooska ah ee ka dhaca meelo xitaa badan. Had iyo goorba way sii socotaa.
Waxyaabaha ay ka mid yihiin Dolby Atmos oo qaadanaya xarun-dhexe, codka maqalka ayaa laga wada hadlayaa aad iyo aadba, gaar ahaan macaamiisha wargeysyada. Jiilka cusub ee baararka dhawaaqa waa cajiib. Waxay codka ku ridi karaan saqafka saqafka waxayna isticmaali karaan dib-u-eegisyo la xakameynayo si ay kuu siiyaan bey'adda il-biyoodka leh. Celcelis ahaan muuqaalku uma baahna inuu la qabsado dejimaha hareeraha ah ee adag, markaa waxaan u maleynayaa inaan arki doonno dalabka jiilka dambe ee maqalka si dhakhso leh oo dhakhso leh.
Waxaan sidoo kale arki doonnaa 4K oo sii kordhaya. Waxay ahayd waxyar gaabis ah markii hore, laakiin waxaan u malaynayaa in daawadayaashu bilaabi doonaan inay ka mahadceliyaan sawirka cajiibka ah maadaama maadooyin badan la helayo, ha ahaato taasi ama wixii ka dambeeyay ama dhacdooyin nool. Iyaguna waxay rabaan inay cod cajiib ah ku wataan, sababtoo ah waxaan horey u leennahay tikniyoolajiyad meesha ku jirta oo gacan ka geysaneysa inay taasi dhacdo, laga qabqabashada iyo gaarsiinta.
Soo Bandhigidda Kaamirada Elektaroonigga ah ee Marshall iyo Kombuyuutareedka loo yaqaan 'ISE 2020' - January 28, 2020
Ka soo muuqday Ar-aragtida TV-ga High-to-End Architecture ee CSTB 2020 - January 27, 2020
2015 hoos bitrate Broadcast Engineer Broadcast Engineering baahinta Calrec Audio CES2017 consoles'ka Graham Chapman Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC MStar dhimista buuqa SoftAtHome Spears & Fiilooyinka TVU Networks UHD / 4K / HD viarte Video Engineer Warsaw	2019-12-12
Previous: Tap King's based Communication Taps AJA Gear wuxuu u baahinayaa Nidaamka Baahiyaha Wadnaha iyo Horumarinta Caafimaadka
Next: Boostada Goldcrest waxay dib ugu laabaneysaa Codadka Magaalada New York ee lixdameeyadii taxanaha dambiyada 'EPIX' ee taxanaha dambiyada 'Godfather of Harlem'